Cristiano Ronaldo oo doonayay inuu ka tago Turin & Kooxda uu rabay inuu ku biiro oo daaha laga rogay! – Gool FM
Haaruun August 4, 2020
(Turin) 04 Agoosto 2020. Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu doonayay inuu isaga tago Juventus oo uu haatan ka tirsan yahay, waxaana daaha laga rogay kooxda uu rabay inuu ku biiro ka hor faafaha Coronavirus.
Xiddiga xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa doonayay inuu isaga tago Magaalada Turin oo ay ka dhisan tahay kooxdiisa Juventus, waxaana uu doonayay inuu ku biiro naadiga Paris Saint-Germain.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in Cristiano Ronaldo uu doonayey inuu ka tago Juventus kuna biiro PSG ka hor inta uusan Coronavirus joojin bixitaankiisii suurtogalka ahaa.
Jariiradda France Football ayaa warinaysa in 35-sano jirkaan uusan faraxsanayn oo uu jeclaan lahaa inuu Caasimadda Faransiiska kala garab ciyaaro Kylian Mbappe iyo NeymarJr, laakiin bilowgii masiibada Adduunka oo dhan ku habsatay ee Coronavirus waxay soo afjartay fursad kasta oo heshiiskiisa lagu dhammayn karay.